डन्डिफोर आए अपनाउनुहोस् यी ६ कुरा - २० आश्विन २०७५, NepalTimes
डन्डिफोर आए अपनाउनुहोस् यी ६ कुरा
डन्डिफोरले प्राय मानिसहरुलाई सताईरहेको हुन्छ । सुन्दरतामा बढी ख्याल गरिने उमेरमा डन्डिफोरले अनुहार नै बिगारिदिन्छ । शरीरमा भिटामिन बी–१२ को मात्रा धेरै हुँदा डन्डिफोर आउने वैज्ञानिकहरुको अध्ययनले देखाएको छ ।
डन्डिफोर निस्किएपछि अपनाउनुपर्ने कुरा :
१.धेरैको बानी हुन्छ, अनुहारमा डन्डिफोर आयो कि निचोरिदिने । यो बानीले अनुहार झन् कुरूप बनाउँछ । तपाईंको पनि यस्तै बानी छ भने तुरुन्त बन्द गरिहाल्नुहोस् । एउटा डन्डिफोर निचोर्दा अनुहारभरि धेरै डन्डिफोर फैलिन थाल्छ ।
२. अनुहारमा डन्डिफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले खानपिन बदल्नुहोस् । भिटामिन बी–१२ पाइने खानामा नियन्त्रण गर्नुहोस् । अनिदोले पनि डन्डिफोर पैदा गर्छ । डन्डिफोरबाट मुक्त हुन न्यूनतम ६ घन्टा निदाउनैपर्छ । दिनमा कम्तीमा आठ गिलास पानी पिउनुपर्छ । पानीले शरीरको छालालाई सधैँ ‘हाइड्रेट’ राख्नुका साथै शरीरमा रक्तसञ्चार राम्रोसँग हुन्छ ।
४. दालचिनीको पाउडर र मह मिलाएर डन्डिफोरमा लगाउनुहोस् र हल्का रगड्नुहोस् । राति लगाएको पेस्ट बिहान मनतातो पानीले धुनुहोस् । डन्डिफोर कम हुँदै जान्छ । जाइफलमा केही थोपा काँचो दूध मिलाएर अनुहारमा लगाउँदा डन्डिफोर हराउँछ ।
५. टुथपेस्ट पनि डन्डिफोरको औषधि हो । डन्डिफोर आएको ठाउँमा राति सुत्नुअघि टुथपेस्ट लगाउनुहोस् । डन्डिफोर गायब भएको पत्तै पाउनुहुनेछैन ।
६. सुन्तला खाने मात्रै होइन, लगाउनुहोस् पनि । बोक्रा खास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुन्तालाको बोक्रालाई कुटेर धुलो पार्नुहोस् । यसमा गुलाबजल मिलाएर डन्डिफोरमा लगाए ठीक हुन्छ ।